ပီအယ်လ်စီ (PLC) ဖြစ်ပေါ်လာပုံပြင်ဆင်
၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ U.S Patent No. 2988237 နဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ Unimate လို့ခေါ်တဲ့ Robot ကို George Devol ကတည်ထွင်ခဲ့သည်။ General Motors Coporation ရဲ့ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်တပ်ဆင်တဲ့ လမ်းကြောင်း assembly line ပေါ်မှာ spot welding လုပ်ဖို့နဲ့ သံရည်ကျိုသွန်းလောင်းထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ချီမ ပို့ဆောင် နေရာချဖို့အတွက် Unimate Robot ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်ကတည်းက Computer ကိုအသုံးပြူ နေပြီဖြစ်သော်လည်း IBM1710 ကဲ့သို့ ရှေးကွန်ပျူ တာများသည် အရွယ်အစားကြီးမားပြီး ဖုန်မှုန်နှင့်အပူအအေးဒဏ်မခံနိုင်သဖြင့် အထူးစီမံထားသောအခန်းများတွင်သာ ထားရသည်။ထိုအခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် အကြမ်းခံပြီး ပိုကောင်းသော PLC ကိုတီထွင်ရန် ကြိုးစားလာကြသည်။
Information Instruments, Inc. ( ၁ နှစ်ကြာသောအခါ Allen Bradley ရဲ့အပိုင်ဖြစ်သွားပါသည်)
Bedford Associates ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Richard Morely ဟာ PLC မှာပါဝင်ရမယ့် အချက်အလက်အသေးစိတ်ကို ၁၉၆၈ ၊ ဇန်နဝါရီ ၊ ၁ ရက်နေ့မှာ အပြီးသတ်ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ U.S Patent No. က 3761893 ဖြစ်ပါသည်။
Modicon ဆိုတဲ့နာမည်မှာ Modular Digital Controller လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။Modular type PLC ထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။လုပ်ဆောင်ချက် ဖန်ရှင်တစ်မျိုးကို Unit တစ်ခု၊ Board တစ်ခု၊ Module တစ်ခု၊ အဖြစ် တည်ဆောက်ထားလျှင် ပျက်၍ပြင်သောအခါ Module တစ်ခုကိုသာ အစာထိုးလဲလယ်ရခြင်းဖြစ်၍ လွယ်ကူအချိန်ကုန်သက်သာသည်။
၁၉၇၇ မှာ Modicon ကို Gould Electronics ကလွှဲပြောင်းရယူပြီး PLC ကိုထုတ်လုပ်သည်။ထို့နောက် ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည့် AEG က Modicon ကိုဆက်လက်လွှဲပြောင်းရယူသည်။ ၁၉၇၃ တွင် Michael Greenberg ကပုံစံထုတ်သည့် Modicon 184 ကိုထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ မှာ Modicon 284 ကို microprocessor သုံးပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ရှစ်ဖ် ရယ်ဂျစ်စတာ နည်းစနစ် (Shift Register Mehtod)
အသုံးပြုသူ နှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်းပြင်ဆင်
အင်နာလော့ အဝင်လမ်း အစိတ်အပိုင်းများပြင်ဆင်
ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းများပြင်ဆင်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပီအယ်လ်စီ&oldid=488995" မှ ရယူရန်
၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။